Sawirro: Qaxootiga Suuriya ee xuduudda Turkiga - BBC Somali
Sawirro: Qaxootiga Suuriya ee xuduudda Turkiga
11 Febraayo 2016
Ilaa 50,000 oo qaxooti ayaa jooga xuduudda Turkiga ay la leedahay Suuriya ee u dhow magaalada Kilis, kadib markii ay ka soo carareen weerarka ay dowladda Suuriya oo taageero ka helaysa Ruushka ay ku qaaday magaalada Xalab.( Aleppo)
Turkiga ayaa sheegay in qaxootiga ay helayaan hoy iyo cunto gudaha Suuriya oo aan loo baahnayn inay soo galaan Turkiga. Turki ayaa waxaa jooga qaxootiga ugu badan ee reer Suuriya- oo gaaraya ugu yaraan 2.5 milyan.
Image caption Xuduudda Turkiga ayaa laga xiray kumanaan qaxooti.
Image caption ilaa 50,000 oo qaxooti reer Suuriya ayaa yimid xuduudda Kilis.
Image caption Dadka ayaa horay u soo qaatay waxay haleelaan.
Image caption Turkiga ayaa ku siinaya qaxootiga teendhiiyin, cunto iyo bustooyin Suuriya dhexdeeda.
Image caption Qaxootiga ugu badan ee reer Suuriya ayaa la dajiyaa xerada Bab al-Salam ee magaalada Azaz ee waqooyiga Suuriya.
Image caption Baauurta gargaarka iyo ambalaasta ayaa loo ogolyahay inay ka gudbaan xuduudda.
Image caption Qaar ka mid ah qaxootiga dhaawaca ayaa loo ogolaaday inay soo galaan Turkiga si ay u helaan adeeg caafimaad.